TOERAM-PIANTSONANA VOATOKANA : Tsy manan-kery intsony ireo fahazoan-dalana teo aloha
Namoaka fanambaràna ny teo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mahakasika ireo toeram-piantsonana voatokana na “Parking reservé”. 14 janvier 2020
Ny faran’ny volana desambra 2019 no nifarana ny fahazoan-dalana ho an’ireo rehetra nisitraka izany. Nilaza araka izany ny teo anivon’ny Kaominina fa tsy misy manana fahazoan-dalana hampiasa an’io toeram-piantsonana voatokana avy amin’ny Kaominina io intsony hatramin’ny fiandohan’ity taona ity vaovao ity. Andrasana, hoy ilay fanambaràna, ny fisian’ny fandaminana vaovao. Voamarina amin’ny alalan’ny takela-by ahitana rojo vy misy laharana nomen’ny Kaominina ireo toeram-piantsonana voatokana.
Izay nangataka ka nahazo alalana tamin’ireo tompon’andraikitra isan’ambaratongany no mametraka izany manoloana ny vavahadiny, na ny tranony na ihany koa ny toeram-pivarotany. Manoloana ity fanambarana navoakan’ny Kaominina ity dia nanao antso tamin’ireo rehetra manana an’io takela-by izy ireo mba hanala izany tsy misy fepetra. Mbola tsy nisy hatreto ny fahazoan-dalàna vaovao navoakan’ny Kaominina. Hentitra ny fanaraha-maso, nanamafy izy ireo fa mahavoasazy ny tsy fanarahana an’io fandaminana napetraka io.
Heverina fa tafiditra sahady ao anatin’ny fanovana ny rafitra sy ny fanovana ny fomba fitantanana eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny fampiatoana aloha ny fanomezana ahalalana an’ireo fiantsonana voatokana. Efa manangasanga sahady mantsy ireo endri-panovana isan-karazany indrindra amin’ny endrika ivelany eto ampovoan-tanana.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (131) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (92) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (87) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (79) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (78) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (68) 22 mai 2020